कोरोनाका कारण मृत्यु भए कसरी हुन्छ शव व्यवस्थापन ? – Upahar Khabar
कोरोनाका कारण मृत्यु भए कसरी हुन्छ शव व्यवस्थापन ?
प्रकाशित मिति : ४ असार २०७७, बिहीबार १८:५७ June 18, 2020
काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइसकेको छ । कोरोनाले मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम कर्म अन्य रोगी अर्थात मृतकको जस्तो हुँदैन । सरकारले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार शव उठाउनुअघि शव वाहनका चालक र कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) अनिवार्य लगाउनुपर्छ ।
कार्यविधि अनुसार अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने आफन्त र नातेदार सबैले अनिवार्य रुपमा पन्जा, चस्मा, टोपी, मास्कसहितको पीपीई लगाउनुपर्ने छ । शवलाई कमभन्दा कम चलाउने गर्नुपर्छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार शवमा लागेका पाइप, केथेटरलगायत सामग्री हटाउँदा सर्तकता अपनाउनुपर्छ ।
शवको कुनै भागबाट रगत बगिरहेको भए होसियारीपूर्वक बन्द गर्नुपर्छ । मृतकलाई अन्तिम संस्कार गर्ने घाटसम्म लान साधारण शव वाहनको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर, सकेसम्म शवलाई छिटो अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्नेछ । साठी वर्ष उमेर कटेका व्यक्ति र दीर्घ रोगीलाई कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नजिकै जान दिनु नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अन्तिम संस्कार गर्नुअघि आफ्नो कुल परम्परा अनुसार शव नछोई पानी छर्किने, पाठ गर्ने र फूलमाला चढाउने गर्नुपर्छ । मृतकका आफन्तले शव हेर्न चाहेमा नछोइकन कम्तीमा एक मिटर टाढाबाट एक/एक जनाले पालैपालो हेर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन् संविधान संशोधन विधेयक, नयाँ नक्साले पायो संवैधानिक मान्यता
सुशान्तको आत्महत्यापछि निशानामा परे सलमान, बलिउडकै अभिनेताबाट टिकाटिप्पणी